Kuze kube manje, i-isiSwidi iloli brand "Volvo" kukhona enokwethenjelwa kakhulu futhi hhayi kuphela ephephile kodwa futhi izimoto onga ekilasini yayo. Lesi sici uqinisekisile ngokuphindaphindiwe ukuthi "Volvo" a winner eziningi "Iloli Yonyaka" emncintiswaneni ngamazwe. Ngenxa yalezi nezinye amaqiniso eminingi emihle, iningi izinkampani kanye abathwali yangasese ukhethe lokhu iloli. Okwamanje, ezinkulu-tonnage amaloli futhi alahle amaloli "Volvo" entsha angathengwa ngasiphi idolobha elidayisa Showroom. Nokho, kulo mshini ke kuletha hhayi kuphela ukujabulela umsebenzi wabo, kodwa futhi inzalo enkulu, kudingeka wazi kahle ukuthi uhlobo imodeli kudingeka athengwe. Kulesi sihloko sibheka ezinye izinhlobo imishini ekhethekile kamakhi Swedish.
"Volvo": imodeli yokulahla FH
Le modeli iloli iyona edume kunayo futhi ethandwa emhlabeni wonke. By the way, FH imodeli itholakala Izigaba eziningana. Lezi kungaba main tractor ugandaganda futhi-20 ton yokulahla amaloli, eyenzelwe ezokuthutha izinto yenqwaba, okufaka okusanhlamvu, ngokuvamile olude. Izimoto kwalesi imodeli kungenziwa ifakwe izinjini ezimbili udizili - D13A futhi D13C. Bobabili amayunithi ezihlukene lobuchwepheshe, kuhlanganise komthamo ziyahlukahluka kusuka 400 kuya 520 amahhashi. Kuthiwa ngisho injini umpofu uyakwazi donsa iloli 40 ton ngesivinini 90 ngehora. izinjini Yamandla ephezulu torque engu - lokhu ingenye izici eziyinhloko ukuthi ukuhlukanisa ngamunye "Volvo" -samosval. Intengo izimoto anjalo angaphezu kwangu izindleko zasekhaya izikhathi Kamaz 1.5-2. Kodwa Kuhle ukukhumbula ukuthi "Volvo" ibusa cishe izikhathi ezingu-2 udizili kancane futhi nginenhlanhla ngesikhathi esifanayo izikhathi 2 imithwalo emikhulu. Ngakho-ke, ukuthengwa iloli Swedish njalo nyama.
"Volvo": FM tipper onobuhle
FM imodeli - isazi kweqiniso ku yizimpahla lesifunda. Le moto angaya ngokusebenzisa engaphezu kwenkulungwane amakhilomitha ngaphandle ukwehluleka olulodwa, okuyinto ebaluleke kakhulu ekwakheni. "Volvo" -samosvaly ingakusiza out kunoma isiphi isimo, ngesikhathi ukuletha izimpahla kusukela inkwali endaweni eqondile ukwakhiwa. Ngokuqondene izinjini, "Volvo FM" linezincazelo eziningi mkhulu kunezinhliziyo FH. Umthengi angakhetha izinjini ezinhlanu ezihlinzekwa inkampani, ngamunye wabo ngempela enamandla futhi ukonga. Futhi ukunikeza ezingeni lelisetulu induduzo travel. zokuthutha yesiFunda "Volvo FM 'kuyokuhambela uhambo abavamile ku Kujabulisa ngempela. Ngaphezu kwalokho, umshini yakhelwe ukuze ngisho ekupheleni kosuku umshayeli cishe engazizwa ukukhathala.
"Volvo": yokulahla FL imodeli
Lokhu iloli omane wadala kuhambo endaweni ezisemadolobheni. Anakho esihle ezibekiweko lobuchwepheshe, maneuverability ezinhle futhi flotation. Umshini ifakwe 7.6-litre engine ephethe namandla 240-290 amalitha. a. Nale injini, imodeli kungenziwa kalula zithutha ngobuningi wezimpahla isisindo amathani 10 kuya 18. Kulokhu, umzimba imoto angafeza noma iyiphi ezokuthutha, kungakhathaliseki ukulethwa itshe afahlazekile noma ukususwa njalo zonke amatshe.
Konke mayelana Gaz 3306
Izici Technical ugandaganda T-25 (isithombe)
International 9800: ezibekiweko lobuchwepheshe
Imoto 33104 GAS: incazelo jikelele kanye nezici
Winter-ovaloli huppa: ukubuyekezwa. Huppa: izingubo izingane
Inqubo of Creation - yobudala kanye nesisindo azinandaba
Design egumbini lokuphumula efulethini: izixazululo stylish
Dream ncwadi. Kungani dream of a rat?
Volkov Fedor Grigorevich: Biography emfushane
Gulnara Islamovna Karimova: Biography, empilweni yakho, umsebenzi wezepolitiki
Pheka sandwich ezisheshayo